Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: အသက် ၂၀ ကျော် ကျောင်းသားကို ထောင်နှစ် ၁၀၀ ကျော် ချမှတ်
အသက် ၂၀ ကျော် ကျောင်းသားကို ထောင်နှစ် ၁၀၀ ကျော် ချမှတ်
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က ကျောင်းသား ကိုဘိုမင်းယုကို ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀၄ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက အပြည့်အစုံတင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဘိုမင်းယုကို ခေါ် ကိုဖြိုးကြီး ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃/၁ တခုတည်းနဲ့တင်ပဲ စွဲချက် ခြောက်ခု တင်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPPB ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူလုပ်ခဲ့တာကလည်း အကြမ်းဖက် ဆူပူတဲ့လုပ်ရပ်တွေ တခုမှမပါပါဘူးလို့ အေအေပီပီ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည် က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သိထားသလောက်ကတော့ သူက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ကိစ္စတို့၊ တခြားဟာတွေ မပါပါဘူး။ အဲဒီလို မပါတဲ့ ကျောင်းသားလေးတယောက်ကို ၁၀၄ နှစ် ချလိုက်တယ် ဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း ကြားရတာ တော်တော်အံ့သြမိပါတယ်။”
ဒီလောက် ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခံရတဲ့ လူတယောက်ကို ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း ကာယကံရှင် ဘက်က ခုခံချေပဖို့ တရားဥပဒေကြောင်း အရ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဘာမှမရခဲ့ဘူးလို့ ကိုဘိုကြည် က ဆက်ပြောပါတယ်။
“သူတို့ ရှေ့နေ ငှားရမ်းခွင့်တို့ ဘာတို့လည်း မရခဲ့ဘူး။ အကျဉ်းချုပ်နည်းနဲ့ပဲ မန္တလေး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ သူ့ကို ပစ်ဒဏ်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုတောင်မှ သေသေချာချာ မသိရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ မိသားစုကလည်း ခုချိန်ထိ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မရသေးပါဘူး။”
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အတွက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း လှုပ်ရှားကြသူတွေကို ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေ ချမှတ်တာ ကိုဘိုမင်းယုကို က ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ၂၈၀ ထက်မနည်းကို ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေ ချခဲ့တဲ့ထဲမှာတော့ ကိုဘိုမင်းယုကို ဟာ အပြင်းထန်ဆုံး ချမှတ်ခံရသူ ဖြစ်တယ်လို့ အေအေပီပီ ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကိုဘိုမင်းယုကို အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာက ပိုပြီး ဖိအားပေး လာအောင် ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ကိုဘိုကြည် က ပြောပါတယ်။
“ဒီဟာက ရိုးရိုးတန်းတန်း ပြစ်ဒဏ်ချတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်စားချေတဲ့ပုံစံမျိုး သက်ရောက်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ ဒီ ကိုဘိုမင်းယုကို နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီတို့ဘာတို့မှာ ဒီအမှုအကြောင်းကို ကျနော်တို့ သေသေချာချာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်အောင်နဲ့ ဘိုမင်းယုကို လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာက ပိုပြီးတော့ တောင်းဆိုလာအောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းရဲ့ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်ပါ။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ကတော့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ ဝေဖန်သံတွေကြား၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပြီး အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသံတွေ ကြားမှာပဲ ဆက်ဖမ်းဆဲ၊ ဖမ်းဆီးထားသူတွေ ကို ထောင်ချဆဲ၊ ထောင်ချထားသူတွေကို ဝေးလံတဲ့ထောင်တွေဆီ ပြောင်းရွှေ့ဆဲ ရှိနေသေးတာမို့ မကြာခင် လပိုင်းတွေ အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်လာဖို့၊ နိုင်ငံရေးအရ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ နည်းပါး လှတယ်လို့ မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ကြကြောင်းပါ။
Posted by yahutha at 2:07 AM
On6February 2009, the United Nations Postal Admi...
nld tw23 Publish at Scribd or explore others: ...
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၈)လ ပြည့်် ၀မ်း...
၂ဝဝ၉ နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း
ဖမ်းဆီးခံ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ကုလ တွေ့ခွင့်ရပြီ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ အန်န်အယ်လ်ဒီ ဂမ်ဘာရီနဲ့ ဆွေး...
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးပွဲခေါ်ဖို့ ထိုင်းဝန...
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ မြန်မာ ကူညီမည်
ရိုဟင်ဂျာတွေ ထိုင်းစစ်တပ် မောင်းထုတ်ပုံ သတင်းမှတ်တ...
100th Anniversary U Thant
၂၀၀၉ မြန်မာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် လူထုအုံကြွမှု...
Please! Share love to the children of Myanmar
နအဖ အစဉ်သွေးခွဲသော်လည်း သွေးမကွဲသော ပြည်ထောင်စုသား...
Celebrating U Thant's Centennial Anniversary (VOA ...
ပြည်ပရောက် မြန်မာ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စ...
Rohingya migrants claim Thai abuses - 24 Jan 09
ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနား
ကျောက်စိမ်း ဥပဒေနဲ့ ငွေကြေး ပိတ်ပင် လိုက်ခံလိုက်ရတ...
Democracy Party News Bulletin
ရခိုင်သတင်းစာ January 2009
ဦးသန့် ရာပြည့် ရန်ကုန်မှာကျင်းပ
ဟီလာရီ ကလင်တန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာဝန် စတင်ထမ်...
မျိုးချစ် ကရင်များဧ။် မျက်ရည် (သို့) ကရင် လောက်ကော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ဦးခွန်ထွန်းဦး။ ကိုမင်းကိုနို...
၄၄ ဦးမြောက် အမေရိကန်သမ္မတသစ် အိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျ...
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF) ရဲ့ ကျေညာချက်
ရွှေတိဂုံ ဘုရားက ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဆုတောင်းပြည့် ဆင်းတ...
ရွှေဝါရောင် ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေ
လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ အဖမ်းခံရ
ပင်လယ်ထဲ မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ မြန်မာရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ထိုင...
မာတင် လူသာကင်း အမှတ်တရဆု ဒေါ်စု ချီးမြှင့်ခံရ
ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၂၀၀၉ သတင်း
ကြေကွဲ အလွမ်းများနဲ့ ချစ်ပုံပြင်
တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရပ် သို့ မဟုတ် တပ်ပေါင်းစု...
8888 People Power Vol 2
Asian Leaders on Burma (VOA Burmese)
အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ခံရသူ လုပ်ငန်းရှင်များ ပြန်လည်ချေပ
Statement of TFB (ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရသစ်အပေါ်သဘောထား)
အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်မှုကို မဝေဖန်လိုဟု မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီပ...
မက်စ်မြန်မာ ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဒဂုံ ဦးဝင်းအောင်ကို ...
မြန်မာ့ ရွှေဈေးကွက် အေးစက်
ဆန္ဒပြ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် (၆) ဦး ပြန်လွတ် (၃) ဦးကို ...
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းစင်ပြိုင်အစိုးရ သက်တမ်းမရှိတော့ဟုေ...
အသက် ၂၀ ကျော် ကျောင်းသားကို ထောင်နှစ် ၁၀၀ ကျော် ချ...
နာဂစ်အတွက် နိုင်ဂျီးရီးယား အကူအညီကိစ္စ လူ့အခွင့်အရေ...
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ခွင့် နိမ့်ကျဆဲ၊ Freedom House အ...
ဇန္နဝါရီလ (၁၂ ) ၂၀၀၉ သတင်းများ
မြန်မာ့အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ထောက်ခံဆန္ဒပြ၍ ...
ရန်ကုန် ဒီပီအေ သတင်းထောက်အား အရေးယူရန် အတိုက်အခံမျ...
၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ
၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ အရေးပါသူများ
ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်မြန်မာမိသားစု ပျော်ပွဲရွှ...
ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအာ...
January 2009 မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
The Independence Day of Myanmar
(၆၁) နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဂျပန်ဌာနခွဲမှ အခမ်းအနာ...
မင်းသုဝဏ်. ဦးသန့်ရာပြည့် အခမ်းအနား
အဟာရစာစောင် ဇန္နဝါရီ (၄)ရက် ၂၀၀၉
Statement of လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနား NLD (လွတ်မြောက...
လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနား NLD (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)မလေးရ...
အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ခြံဝင်းအတွင်း...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအ...
LDBနာဂိုယာ(ဂျပန်)မှ လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်၊နို...
Burma Democratric Concern (BDC) on 2010 Elections
2009 Greeting VOA Part B
2009 Greeting VOA Part A
61ST- BURMA INDEPENDENCE DAY-2009
မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လွတ်လပ်ရေး...
Voice of Burma (ပြည်သူ့ အသ)ံ စာစောင်4Jan 2009
NLD ၏ 2009 အထူးကျေညာချက်
Statement of CPPA
Independence Day Statement by Free Burma Federatio...
8888 power စာစောင် ဇန္နဝါရီ ၂၀၀၉
NCUB Statement on New Year 2009
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၇)လ ပြည့်် ၀မ်း...
N.L.D( LA)J B၂၀၀၈-၂၀၁၀ အလုပ်အမှုဆောင်သက်တမ်း၏ ပထမအြ...
၂၀၀၉ ထဲ ဆန္ဒပြမှုထပ်လုပ်မယ်လို့ ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင...